स्वप्निल भ्यालिको मायालुलाई प्रेमपत्र - फरकसन्देश : फरक पहिचान र धारका साथ ।।pharaksandesh.com-News from Nepal
स्वप्निल भ्यालिको मायालुलाई प्रेमपत्र
फरकसन्देश सहकर्मी || २०७७ माघ २४ शनिवार 09:17 AM
यो ओशिलो मौसमलाई च्यालेन्ज गर्दै कलकल बग्ने सुन्दर खोलाको शान्त बगरमाथि तिमीलाई सम्झँदै सनबाथ गर्दैछु। एक्लै, नितान्त एक्लै बसेर म तिमीलाई नै सम्झँदै छु देव। सर्वप्रथम त पृथ्वीको सुन्दर देश नेपालबाट म तिम्रो दिर्घायुको कामना गर्दछु।
धेरै पहिलेदेखि नै ह्रदयान्तरमा गुम्सिएर बसेका चाहनाका भण्डारलाई पोख्ने जमर्को गरेकी छु।तिमीसँगको मेरो एकोहोरो प्रेमकथा न म टुङ्ग्याउन सक्छु न त म तिमीलाई अरुका सामु उभ्याउन नै सक्छु। जुनकुरा सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्न, त्यस्तै कुराको भ्यालु धेरै हुने गर्छ मानव जगतमा। मैले पनि तिमीलाई आफ्नो बनाउन दृढ सङ्कल्प सहित अगाडि बढेकी हुँ। यो तिमीसँगको एकोहोरो माया प्रेमको कुरा म कसैसँग सेयर गर्न सक्दिनँ। मैले प्रेम गरेको तिमी मानिस होइनौ भन्दा यो सारा जगतले मलाई पागल साबित गर्नेछ र अमानुसको ट्याग भिराएर मेरो बाँकी जीवन नारकीय बनाउन बाध्य गराउनेछ।
म आफुलाई विश्व प्रसिद्ध प्रेमिल जोडी बनाउन नसकुँला तर तिम्रो नामको ट्याटु खोपेर तिमीलाई सँगै साथै राख्न कसैले रोक्ने छैन मलाई। यो पनि मेरो एउटा आनन्दको एकलौटी अनुभूति हो। स्वर्गका परिहरुसँग स्वर्गमा नै बास गर्ने तिमीलाई मैले एउटा मुर्ति देखेर नै मन पराएकी हुँ। साक्षात् श- शरीर बिपनामा पनि देख्ने यो मेरो चाहना शायद पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन। जे होस् , म तिमीप्रति क्रेजी छु। तिमीलाई भेटेर एकपटक अमेजन जङ्गलभित्रै हराउने रहर, पानी माथिको सहर भनेर चिनिने भेनिस पुग्ने इच्छा र तिम्रो स्वर्गको कटेज हेर्ने चाहना सबै सबै, मैले मेरो डायरीमा लेखेर राखेकी छु। तिमीसँगको भेटमा मेरो डायरी देखाउँछु ल। मैले तिम्रो नाममा लेखेका कविताहरू पढेर कति रोमाञ्चित हुन्छौ होला तिमी म कल्पना गर्न पनि सक्तिनँ।
यो प्रत्येक वर्ष आउने भ्यालेन्टाइन डेसँगै मेरो तिमी भेट्ने इच्छा झन् झन् तिव्र भएर आउँछ। आखिर, म पनि मान्छे नै त हुँ, त्यतिबेला म दौडिएर तिम्रो मुर्ति अगाडि उभिन्छु र आँखा बन्द गर्दै तिमी मसँग छौ भन्ने महसुस गर्छु र चन्चल मनलाई शान्त बनाउने प्रयास गर्छु।
एउटा कुरा बुझ, मेरो प्रिय! मैले तिम्रो जवानीलाई मन पराएर माया गरेकी भने पक्कै होइन। तिम्रो यो सारा जगतलाई बसमा राख्न सक्ने निश्चल शक्तिले मलाई आकर्षित पार्यो। मैले तिमीलाई त्यो बेलादेखि माया गरेँ जुनबेला मलाई तिम्रो शक्तिको पहिचान भयो। जिन्दगीको लामो यात्रामा धेरै मानिसहरूसँग मित्रता भयो तर मान्छेको स्वार्थी प्रेममा म धेरै समय टिक्नै सकिनँ। तिमीलाई देखेको दिनदेखि तिम्रो यादले सताइरह्यो। म छक्क पर्छु, त्यति सानो उमेरमा नै मैले तिमीलाई मन पराएँ, शायद तिमी देवता भएर पो हो कि! साँच्चै, मन पराउन, माया लाउन, उमेरले छेक्दैन रहेछ क्यारे! म बाँचुन्जेल तिमीलाई चोखो अनि निस्वार्थ प्रेम गर्छु। एउटा मुर्तिमा सजिएर उभिएको देवतालाई मैले मन पराएर प्रेम गर्नुमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। म स-सम्मान तिमीलाई प्रेम गर्छु प्रिय! मेरो माया स्विकारीदेऊ! हे दयालु महांकाल, तिमी मेरो एउटा कुरा बुझिदेऊ, मेरो तिमीप्रतिको प्रेम अरु प्रेम रोगीहरुको जस्तो हुँदै होइन, मेरो प्रेम उनीहरुको भन्दा पृथक छ, अनौठो छ र उच्च छ। तिमी स्वर्गको देवता, म पृथ्वीमा बस्ने एक साधारण नारी। मेरो प्रेममा शारीरिक आकर्षणले कुनै माने राख्दैन त्यसैले मेरो प्रेम अन्तरात्मादेखि निक्लिएको एउटा मिठो आभाष हो।
प्रिय महांकाल, तिम्रो सम्बोधनमा कति मिठास छ, कति माया छ, कति त्याग छ, कति समर्पण छ, शायद मैले त्यो एकदुई वाक्यमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। जुनसुकै परिस्थितिमा म तिमीलाई माया गर्नेछु, इज्जत दिनेछु र सधैँभरि मेरो ह्रदयमा सजाएर राख्नेछु त्यसैले जुनी जुनी भरि म तिमीलाई नै पर्खेर बस्नेछु।